| satchel Buy ကျောင်းက | ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အခမဲ့အရောင်စာမျက်နှာများ
အဆိုပါ satchel သင်တန်းအမျိုးမျိုးရှိသမျှကျောင်းကအစအဦး၏စိတ်နှလုံးသည်။ ခရမ်းရောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်, ပင်လယ်ဓားပြတွေသို့မဟုတ်ကြံ့နှင့်တကွ, အဓိကအရာ satchel ထိုသူငယ် likes ကြောင်းအပြာသို့မဟုတ်အဝါရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ မိဘတစ်ဦးအဖြစ်, သို့သော်ကျနော်တို့ knapsack ဝယ်ယူမှာကြည့်ထက်ဝက်သာစစ်တိုက်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ပု satchel ကအနည်းဆုံးမူလတန်းကျောင်း၏ပထမလေးနှစ်ရှင်သန်ဖြစ်ရပါမည်။
ကျွန်တော်မိဘများနေဆဲငါတို့သားသမီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပထမဦးဆုံး satchel အပေါ်အများကြီး သာ. ကြီးမြတ်တောင်းဆိုချက်များကိုရှိသည်။
သင့်ကလေးထို့ကြောင့်ပြီးသားသူ၏အိပ်မက် knapsack ရွေးကောက်တော်မူပြီဆိုရင်, သင်အောက်ဖော်ပြထားစံအပေါ်အခြေခံပြီးဒီ model စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းသင့်ကလေးမှာပါတဲ့မော်ဒယ်များရောင်းထွက်နှင့်သင့်ကလေး၏စိတ်ပျက် correspondingly ကြီးမားနေကြသည်အဖြစ်လျင်မြန်စွာသိပ်နောက်ကျမဝယ် satchel သင့်ပါတယ်!
အဆိုပါ satchel ဝယ်ယူသည့်အခါအဘယျသို့အဘို့အကြည့်ဖို့
အလွန်အရေးကြီးသောပထမဦးဆုံးခွင့်ပြုချက်၏တံဆိပ်ခတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ satchel သည့်စံချိန်စံညွှန်း Din 58124 ကဏ္ဍသင့်ပါတယ်။ ဤသည်အသစ်ကကျောင်းမှာအိတ်လည်းရေစိုခံလက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံကြောင်းအာမခံပါသည်။ စံတံဆိပ်ပါသို့မဟုတ်TÜVတံဆိပျဖွငျ့ဤစံတွေ့ဆုံရန်သောသည်းခံစိတ်ကြောင်းတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
ဒါ့အပြင်ရောငျပွခြင်းနှင့်ချောင်းအရောင်များထွက်သည်ကိုကြည့်ပါ။ သင့်ကလေးကပါသေးမှိန်သောအခါပြီးသားဆောင်းရာသီတွင်အပြေးစတင်ရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ရောငျပွခြင်းမရှိဘဲအမှောင်အရောင်တွေညံ့ဖျင်းဤအရပ်မှအဆိုပါကျောပိုးအိတ်ကျိန်းသေဒီကာကွယ်မှုရှိသင့်, မော်တော်ကားသမားများကမြင်ကြသည်။ အဆိုပါရောငျပွကားတစ်စီးရှေ့မီး၏အရောင်သည်အလင်းကိုပြန်ပစ်နှင့်သင့်ကလေးအတွက်ကိုအလွယ်တကူမြင်နိုင်ကြောင်းအာမခံပါသည်။ , အထူးသဖြင့်အခါ satchel ဟာကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကြီးမားရောငျပွ, ပိုကောင်းအဝါရောင်တောက်တောက်သို့မဟုတ်လိမ္မော်ရောင်မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါဟာသင့်ကလေးကိုရေရှည်မှာသို့မဟုတ်ကျောင်းဘတ်စ်ကားယူရမယ်အထူးသဖြင့်လျှင်, satchel အငြိမ့်ထိုင်လျက်ကြောင်းသင်တန်းအလွန်အရေးကြီးပါသည်။ အဆိုပါသည်းခံစိတ်ဒီတော့ဆင်းရဲသားမထိုက်မတန်လည်းပြဿနာတွေနဲ့ပင်ပျက်စီးမှုကို back ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်, ပြဋ္ဌာန်းချက်ဆန့်ကျင်ကအရမ်းခက်ခဲမကြာခဏဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ risers ထို့ကြောင့်ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်စွာရာတေးသံမှာအနည်းဆုံးလေးစင်တီမီတာဖြစ်သင့်သည်။
တစ်ဦး Ergonomics ပုံ satchel-ပြန်လည်း satchel ဝယ်ယူအတွက်အရေးပါတဲ့စံနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ သူကကိုယ်ခန္ဓာ၏အတော်ကြာအစိတ်အပိုင်းများမှာပစ္စုပ္ပန်ကြီးနှင့် risers ကောင်းစွာရာတေးသံဖြစ်သည်။ ကျောင်းလွယ်အိတ်သူငယ်၏နောက်ကျောကျော်လွန်တိုးချဲ့ဘယ်တော့မှသငျ့သညျ။
ဒါဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိနေဆဲ Stock satchel နှင့်အတူပြေးစမ်းပါစေဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင့်ကလေးကိုလည်းပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အပြည့်အဝ knapsack သင့်ရဲ့ကျောဘက်မှာခံစားရပုံကိုခန့်မှန်းနိုင်ပါ။
ဘက်အိတ်ကပ်များနှင့်ကောင်းစွာ lockable အဖုံးနှင့်အတူ School တွင်အိတ်
ရှိပြီးသားအကောင်းတစ်ဦးအခြေခံဖြစ်သော, အ satchel အထက်ပါအပေါငျးတို့သတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ရွေးချယ်ထားသောကျောင်းကအိတ်နေဆဲဘက်အိတ်ကပ်ထားပြီးလျှင်, လမ်းအတွက်ဘာမျှမဝယ်ယူနေသည်။
အဆိုပါဘက်အိတ်ကပ်ရေပုလင်းများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ အားလုံးမဟုတ်သည့်ပုလင်းကိုညွှန်ကြားချက်ယုံကြည်ဖို့လိုလားသကဲ့သို့သိပ်သည်းဖြစ်ကြ၏။ ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမရေကြီးမှုဟာ satchel ထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်စာအုပ်များနှင့်မှတ်စုစာအုပ်ခြောက်သွေ့သန့်ရှင်းတဲ့ရှိနေဆဲ, ရေပုလင်းပု knapsack သူ့ဟာသူအတွက်ပေမယ့်ပြင်ပမှာအိတ်ကပ်ထဲမှာမစောင့်, ဖြစ်နိုင်သမျှမဖြစ်သင့်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးပေမယ့်မနည်းအရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်ပါသည် အဆိုပါ satchel ပိတ်, သင့်ကလေးကအလွယ်တကူနှင့်အလျင်အမြန်ဖွင့်နိုင်ရပါမည်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်စမ်းသပ်ပြီးနိုင်ပါသည်။ မ, အနည်းဆုံးအမှန်တကယ်ယခုပျောက်ဆုံးသာသင့်လျော်သောမြင်ကွင်းတစ်ခု - ကံကောင်းထောက်မစွာမပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ဤအဲဒီမှာပါ!